यस्ता छन् फलफूलको जुससँग प्याजलाई खाँदा हुने फाइदाहरू - ज्ञानविज्ञान
तपाइले जीवनलार्इ सहज रूपमा जिउन सक्नुहुन्छ । स्वस्थ्य रहनाका लागि खानपान र व्यायामहरूमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।
त्यसका लागि केही यस्ता चार कामहरु गर्नुहोस्
४. लसुन र प्याजमा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने सबै तत्व विद्यमान हुन्छन् । बालबालिकालाई हुने धेरै संक्रमणलाई काँचो लसुनको सेवनले रोक्छ । लसुन, प्याज काँचै खाएको राम्रो, अनि प्याजलाई फलफूलको जुससँग लिए हुन्छ । ५. दूध वा दही खाएर वा चक्की खाएर भएपनि दिनदिनै क्याल्सियम शरीरलाई दिलाउनुस् । ती वर्षको भएपछि तपाईंको हाडको घनत्व घट्दै जान्छ । हड्डी जोगाउन तपाईंले कम्तीमा पनि २०० मिलिग्राम क्याल्सियम लिनैपर्छ ।
Topics #जुस #प्याज
Don't Miss it किन मान्दैनन् युवतीहरु अण्डा खान ? यस कारण
Up Next तपाईंको नराम्रा बानी र विचार यसरी हटाउन सकिन्छ